IPharadesi Palm Beach Cottage- Kumnandi elangeni 🔆 🌺🏖️ - I-Airbnb
IPharadesi Palm Beach Cottage- Kumnandi elangeni 🔆 🌺🏖️
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Ureaka
ICottage Enhle enamagumbi amabili okulala itholakala eBlack Point Exuma Cays. Esinye seziqhingi eziningi ezakha i-Exuma Cays, lapha, e-Bahamas. Ikotishi litholakala phakathi nebanga lokuhamba layo yonke imisebenzi yasendaweni ngesikhathi esifanayo linikeza izivakashi inani eliphelele le-Seclusion kanye Nobumfihlo Izivakashi ezingase zidinge.
Woza ujabulele ukuthula nokuthula kwe-Black Point Exuma Cays. Le cottage🌺 enamagumbi amabili okulala itholakala phakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo layo yonke imisebenzi yasendaweni ngesikhathi esisodwa, inika izivakashi inani eliphelele lokuhlala ngasese nobumfihlo izivakashi ezingase zidinge.
Ezungezwe iBlack Point, amanzi olwandle aba nemibala ehlukahlukene eluhlaza okwesibhakabhaka, ilanga ngokuvamile aliphumi eholidini, futhi abantu bahlale benobungane futhi bemamatheka. Ukuhlala nathi endlini yethu encane enhle kukunikeza ukufinyelela kukho konke lokhu kuyilapho ujabulela isiqhingi esiphephile, esihlanzekile, esifinyeleleka kalula ngomoya noma ngesikebhe. Ikotishi litholakala ezinyathelweni ezimbalwa ukusuka ogwini lolwandle, i-Atlantic Ocean, kanye ne-Bahama Banks engashoni, libeka indawo yesehlakalo sokushona kwelanga okuhle nokuphuma kwelanga kanye nokufinyelela kumoya opholile opholile wasolwandle. Noma ngabe ukhetha ukuchitha iholidi lakho, silapha ukuze sinakekele zonke izidingo zakho. Leli kotishi elihle liyindawo efanelekile yokuvakasha kwe-Bahamian okuyiqiniso.
Ikotishi lihlome ngokugcwele zonke izinto ezidingekayo zokugezela nezokulala, amalineni ahlanzekile namasha, izitsha zasekhishini, i-TV yesathelayithi, isiphephetha-moya, kanye nokufinyelela ku-Wi-Fi yamahhala. Nakuba zikhona izitolo ezitolo esiqhingini, singagcina ngokugcwele ikotishi ngaphambi kokufika kwakho uma sinikezwe uhlu lwegrosa kusengaphambili, futhi ukhokha esikukhokhela esitolo segilosa + insizakalo yokuthumela.
Ngizotholakala ukuze ngihlalise isivakashi.
Sihlanza izindawo ezithinta phezulu, kwehle kuze kufike kwiknobho yomnyango
Sisebenzisa izinto zokuhlanza nezibulala amagciwane ezigunyazwe izikhungo zezempilo zomhlaba wonke, futhi ngigqoka amagiya okuzivikela ukuze ngisize ekugwemeni ukutheleleka okuhlukahlukene.
Sibhekisela ekuhlanzeni izinhlu zokuhlola ukuze kuhlanzeke igumbi ngalinye
Sihlinzeka ngezinto zokuhlanza ezengeziwe, ukuze ukwazi ukuhlanza njengoba uhlala
Sithobela imithetho yendawo, okuhlanganisa nanoma yimiphi eminye imihlahlandlela yokuphepha noma yokuhlanza
Silandela inqubo yokuhlanza ethuthukisiwe ye-Airbnb enezinyathelo ezinhlanu, esekelwe ebhukwini le-Airbnb lokuhlanza elasungu…